तिथि मेरो पत्रु » तपाईं साँचो प्रेम अनलाइन पाउन सक्नुहुन्छ?
बस दस वर्ष पहिले अनलाइन डेटिङको व्यावहारिक चलन थियो, र यो थाह भयो गर्नेहरूलाई यो 'सामान्य तरिका' मा एक मिति प्राप्त सक्दैनन् प्रकार साँच्चै 'बाहिर त्यहाँ' को लागि वा हताश लागि एक अनौठो घटना थियो भनेर सोचेको.
पटक परिवर्तन कसरी! अनलाइन डेटिङ व्यस्त लागि अब आदर्श छ, क्यारियर-दिमाग मान्छे, तथापि यो अनलाइन डेटिङ रेल मा पौडी खेल्दै गरेका बस व्यस्त मान्छे होइन – हरे कुनै! आफ्नो अंकल सैम गर्न विधवा अर्को ढोका देखि हरेक यसलाई हुन लाग्न! पुराना र युवा, सबै वर्गका पुरुष तथा महिला, धर्म, जात र पृष्ठभूमिका यो काम गरिरहेका छौं. अनलाइन डेटिङ मात्र 'एक्लो हृदय' विचार थियो भन्ने कुरा देखि परिवर्तन भएको छ, मिति एक गम्भीर मूलधारको बाटो बन्ने. तैपनि सुन्दर, सफल मान्छे यो काम गरिरहेका छौं, सही सबैजना संग! हामी सबै बुझे कारण बस कसरी सुविधाजनक छ! यस अनलाइन युग मा यो एक प्राकृतिक प्रगति थियो.
त्यसैले भला र डेटिङ को विपक्ष अनलाइन के हो र तपाईं साँच्चै यसरी साँचो प्रेम पाउन आशा गर्न सक्छौं?
खैर पेशेवरों केही स्पष्ट गर्दै. तपाईं परम्परागत तरिकामा कुनै पनि डेटिङ गरेर पूरा गर्न सक्षम हुनेछ भन्दा तपाईं धेरै मानिसहरू पहुँच प्राप्त. अनि अझै यो पनि पुच्छर मा एक खील संग आउन सक्छ, तपाईं सामान्यतया संग जडान गर्न मन सक्छ जो तपाईं पाउन सक्षम हुनेछ मानिसहरूको धेरै छन् भन्ने अर्थ. साथै अनलाइन डेटिङ हुन सक्छ कि 'छिटो कारोबार' को एक निश्चित राशि छ, जो तपाईं यो लागि तयार छैनन् भने, एकदम disheartened महसुस एक व्यक्ति पार्नसक्छन्.
म 'छिटो कारोबार' के मतलब छ? खैर तपाईं कुनै एक दिन कुरा हुन सक्छ, मात्र पूर्णतया छ रडार अर्को बन्द गायब. यो एकदम साधारण छ. तपाईं जवाफ प्राप्त कहिल्यै ई-मेल बाहिर पठाउन हुनेछ र संभावना तपाईं जवाफ कहिल्यै केही भन्ने छ या त. यो सम्म कम व्यक्तिगत डेटिङ को परम्परागत तरिकामा केही भन्दा छ र यो केही मानिसहरू हैरान पार्यो. म यो कठिन पुराना पुस्ताका हिट देखिन्छ देखेको छ, तिनीहरूले परम्परागत डेटिङ को बढी शिष्ट अभ्यासहरू प्रयोग गरिन्छ रूपमा, तिनीहरूलाई फेरि केटासित चाहँदैनथे भने कहाँ उदाहरणका लागि तपाईं कुनै बताउनेछन्, र यो सिर्फ अनलाइन जस्तै छैन (हामी यो हुनुपर्छ लाग्छ भने पनि).
यी साना सूक्ष्म स्वीकार गर्न सक्छन् तर यदि, म मान्छे संग जोडने लागि यो एउटा ठूलो उपकरण हुन सक्छ विचार, र हाँ प्रेम भेट्टाउनु पनि लागि.
पक्कै ई-मेल मार्फत सञ्चार अलिकता कम रोमान्टिक र अधिक 'औपचारिक' कुरा पनि छ, तथापि यो तपाईं प्राप्त र क्षमता प्रेम गतिविधिलाई संग च्याट के ई-मेल हेर्न एक चर्चा हुन सक्छ. अनि पाठ्यक्रम तपाईं वास्तविक 'व्यक्ति मा' डेटिङ चरण प्राप्त भने, यो रोमान्स त अधिक सजिलै सुविधा सक्छ.
तपाईं पनि तिमी शायद प्रेममा पर्नु हुदैन धेरै मानिसहरू पूरा हुनेछ भन्ने तथ्यलाई लागि तयार हुन छ – वास्तवमा तपाईं पनि उनलाई मन सक्छ! कसैले एक ठूलो प्रोफाइल पोस्ट गर्न सक्छन् तर तपाईं वास्तविक संसारमा तिनीहरूलाई पूरा गर्दा जडान बस त्यहाँ छैन. केही scammers अनलाइन छन् किनभने पनि सावधान, साँचो छैनन् र अझै बाहिर मानिसहरू आफ्नो पैसा वा व्यक्तिगत विवरण लागि घोटाला प्रयास गर्न. मेरो अनुभव मा पनि साधारण छैनन्, तर तिनीहरूले मिश्रण मा छन्. बस 'मजा' गर्ने मान्छे पनि छन्, अनलाइन सेक्स लागि देख रहे हो मान्छे, र पनि केही मानिसहरू विवाह गर्ने. तपाईं यस ह्यान्डल र सक्दैन तर यदि डे-उत्प्रेरित हुन, त्यसपछि तपाईं पक्कै गर्न सक्छन् तपाईं लागि सिद्ध छ जो अनलाइन कसैले पूरा, र जसलाई एक पटक तपाईं वास्तविक जीवन मा पूरा, तपाईं संग वास्तविक प्रेम गर्न सक्छन्. म यसरी भेट गरेका धेरै सफल युगल थाह.
बस यद्यपि सम्झना, तपाईं व्यक्ति तिनीहरूलाई भेट सम्म यो वास्तविक छैन.
त्यसैले रियल लाइफ = रियल प्रेम.
अनि यो तपाईं एक साँचो जडान मायालु सम्बन्ध विकसित गर्न सक्छन् भनेर अफलाइन र वास्तविक जीवन मा ले एक पटक मात्र छ.